လူကာကူ ကို စိတ်ဝင်စားလာတဲ့ ထိပ်သီးကလပ် ၊ ကွင်းလယ်လူအတွက် စတင်လှုပ်ရှားတဲ့ အာဆင်နယ် ၊ မာနေးရဲ့ ဂိုးနဲ့ ၃ မှတ်ရတဲ့ ဆီနီဂေါ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
လူကာကူ ကို စိတ်ဝင်စားလာတဲ့ ထိပ်သီးကလပ် ၊ ကွင်းလယ်လူအတွက် စတင်လှုပ်ရှားတဲ့ အာဆင်နယ် ၊ မာနေးရဲ့ ဂိုးနဲ့ ၃ မှတ်ရတဲ့ ဆီနီဂေါ တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ယမန်နေ့ ညက ကစား ခဲ့တဲ့ FA Cup တတိယဆင့် ပွဲစဉ် မှာတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ အက်စတွန် ဗီလာ အသင်းကို အိမ်ကွင်း မှာ ၁-၀ နဲ့ အနိုင် ရရှိပြီး နောက်တဆင့်ကို တက်လှမ်း သွားနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ဟာ စတုတ္ထ အဆင့်မှာတော့ မစ်ဒယ်ဘရော့ အသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ကစား ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး တောင်ပံ ကစားသမားလေး စတီဗင် ဘာ့ဂျ်ဝင်း ကို နယ်သာလန် ကလပ် အိုင်ယက်စ် က စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် စပါး ကတော့ ၁၅ သန်း ထက် ပိုမို အလိုရှိ နေပြီး နယူးကာဆယ် လို ငွေသုံးနိုင်တဲ့ အသင်းတွေ ဆီက ကမ်းလှမ်းမှု ကို စောင့်ဆိုင်း နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
အိုင်ယက်စ် ဟာ အိုနာနာ ရဲ့ နေရာ အတွက် ဂိုးသမားသစ် ခေါ်ယူဖို့လည်း စိတ်ကူး ထားပြီး မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဂိုးသမားလေး ဟန်ဒါဆင် ကို မရ ခဲ့ပါက ရီးရဲ ဂိုးသမား လူနင် ကို ပြောင်းလဲ ချဉ်းကပ် သွားဖို့ ပြင်ဆင် ထားတယ် လို့ သိရ ပါတယ် ။
စပါး ကစားသမားဟောင်းတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဂျင်မီ အိုဟားရား နဲ့ ဒန်နီ မာဖီ တို့ ကတော့ စပါး ကွင်းလယ်လူ အန်ဒွန်ဘီလီ ဟာ နည်းပြ ကွန်တီ အကြိုက် ကစားသမားမျိုး မဟုတ်ကြောင်း သုံးသပ် ပြောဆိုရင်း အန်ဒွန်ဘီလီ အနေနဲ့ ဇန်နဝါရီ မှာတင် အသင်းသစ် ပြောင်းလဲ သင့်တယ်လို့ အကြံပြု တိုက်တွန်း သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မကြာခင် ရက်ပိုင်း အတွင်းမှာ အကာကွယ် မျက်နှာဖုံး တပ်ဆင်ပြီး နာပိုလီ အတွက် ပြန်လည် ကစား ပေးနိုင်တော့မယ့် တိုက်စစ်မှူး ဗစ်တာ အိုဆင်ဟမ်း ကို ဥရောပ အသင်း အချို့ က စိတ်ဝင်စား နေပြီး လူကာကူ ကို ပြန်ရောင်းထုတ်မယ့် ချဲလ်ဆီး လည်း ပါဝင်တယ် လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး နဲ့ စာချုပ် သက်တမ်း နောက်ဆုံး ကာလ ကို ရောက်ရှိ နေတဲ့ ဒိန်းမတ် နောက်ခံလူ ခရစ်ရှန်ဆန် ကို ဘွန်ဒစ်လီဂါ ကလပ် ဒေါ့မွန် ကလည်း စိတ်ဝင်စား လာခဲ့တယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ကနေ ရာသီ အကုန်မှာ ပြန်ရောင်းထုတ်ခံ ရဖွယ် ရှိတဲ့ တိုက်စစ်မှူး လူကာကူ ကို PSG က စိတ်ဝင်စား နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်း တခု ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
PSG ဟာ အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး အီကာဒီ ကို လက်လွှတ်ဖွယ် ရှိနေသလို နွေရာသီ မှာလည်း ဘာပေ အသင်းပြောင်းဖွယ် ရှိခဲ့ပါက လူကာကူ ကို ခေါ်ယူဖွယ် ရှိတယ်လို့ သုံးသပ် လာခဲ့ကြပါတယ် ။
PSG ဟာ ချဲလ်ဆီး နဲ့ စာချုပ် ကုန်တော့မှာ ဖြစ်ပြီး ရီးရဲ မက်ဒရစ် နဲ့ အသံထွက် နေတဲ့ ဂျာမန် နောက်ခံလူ ရူဒီဂါ ကိုလည်း ခေါ်ယူ နိုင်ဖို့ ကြိုးစား သွားမယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အသင်းဟာ ရေယို ဗယ်လက်ကာနို အသင်းရဲ့ ဂိုးသမား စတိုးလ် ဒီမီထရိဗ်စကီး ကို ခေါ်ယူဖို့ ကလပ် ၂ သင်းကြား သဘောတူညီမှု ရယူ နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်း သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် ဟာ ဘရာဇီး ကလပ် ပါမေးရပ်စ် အသင်းရဲ့ အသက် ၂၀ အရွယ် ကွင်းလယ် ကစားသမားလေး ဒါနီလို ကို ယူရို သန်း ၂၀ နဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု ပြုလုပ် လိုက်တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် နည်းပြ အာတီတာ က ဒါနီလို ဟာ အာဖရိက ဖလား ပြိုင်ပွဲကို သွားရောက် ကစားနေတဲ့ သောမတ်စ် ပါတေး ရဲ့ နေရာကို ဖာထေး နိုင်ဖို့ မျှော်လင့် ထားတယ်လို့လည်း သိရ ပါတယ် ။
ယူဗင်တပ် အသင်းမှာတော့ ဥက္ကဌ အက်ဂါနယ်လီ နဲ့ ကွင်းလယ်လူ ရမ်ဆေး တို့ဟာ ကိုဗစ်ပိုးတွေ တွေ့ရှိ ခဲ့ကြတယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် ဟာ ဖီအိုရင်တီးနား တိုက်စစ်မှူး ဒူဆန် ဗလာဟိုဗစ် ကို ခေါ်ယူ နိုင်မယ် ဆိုပါက စုစုပေါင်း ပေါင် သန်း ၁၅၀ အထိ ကုန်ကျ သွားဖွယ် ရှိတယ်လို့လည်း သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ရီးရဲ ကွင်းလယ် ကစားသမားကြီး တိုနီ ကရူးစ် ကတော့ သူဟာ ရီးရဲ မှာပဲ ကစားသမားဘ၀ ကုန်ဆုံး သွားလိုတယ်လို့ ဖွင့်ဟ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ရဲ့ ဖာရန်တောရက်စ် နဲ့ ပီဒရီ တို့ကတော့ နောက်ဆုံး ဆေးစစ်မှုမှာ ကိုဗစ် ပိုး မတွေ့ရှိ တော့တာကြောင့် စပိန် စူပါဖလား ပွဲ ကစားမယ့် ဆော်ဒီ အာရေဗျ ကို အသင်းနဲ့ ပူးပေါင်းဖို့ ထွက်ခွာ သွားနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
ယမန်နေ့ ညက ဆက်လက် ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့တဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အာဖရိက နိုင်ငံများ ဖလား ပြိုင်ပွဲရဲ့ အုပ်စု အဆင့် ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ ဆီနီဂေါ အသင်းဟာ တိုက်စစ်မှူး မာနေး ရဲ့ ၉၀+၇ မိနစ် မှာ ရရှိတဲ့ ပင်နယ်တီ သွင်းဂိုး နဲ့ ဇင်ဘာဘွေ အသင်းကို အနိုင် ယူပြီး အနိုင်ရလဒ် နဲ့ စတင် ဖွင့်လှစ် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
အခြား ပွဲစဉ်တွေ မှာတော့ ဂီနီယာ က မာလာဝီ ကို ၁-၀ ၊ မော်ရိုကို က ဂါနာ ကို ၁-၀ တို့နဲ့ အသီးသီး အနိုင် ရရှိ သွားခဲ့ ကြပါတယ် ။
Previous Article မထင်မှတ်တဲ့သူ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မန်ယူနိုက်တက်ရဲ့ FA Cup နိုင်ပွဲက ကစားသမားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်များ
Next Article ဗလာဟိုဗစ် ကို ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ အတွက် စုစုပေါင်း ပေါင် သန်း ၁၅၀ အထိ သုံးစွဲရဖို့ ရှိနေတဲ့ အာဆင်နယ်